भोग – मझेरी डट कम
‘हाम्री कुलकी आमा हुन् दख्खिन कालीमाई । तिनलाई बर्सेनी गएर भेट्नु !’
हाम्रो पुर्खाको मान्यता यस्तै शक्तिको सेरोफेरोमा रहँदैआएको छ । त्यो उपासनाले बलशाली बनायो र भनिरह्यो-‘तिमी अघि बढ !’
ढुङ्गाले तरबार चम्काउनेहरू थिए । चुप्पी, खुँडा र चुलेसीमा साँध लाउनेहरू थिए । तिनका अनुहारमा रगतको उम्लाइ थियो त्यत्तिकै चमकदार । बालुवा, ढुङ्गा र चकमकले टलक्क टल्केका खुकुरीका धारमा आफ्ना अनुहार हेरेर ती भन्थे-‘आज चैँ ढालिन्छ !’
रगतको खोलो छ वरपर । आहालजस्तो ठाउँ, रगतको आहाल । रगत आफँै जमेर दलदल छ । जम्न नसकेको तह बगेको छ खोलाको धारमा । हँड्याइलो रङ बोकेर छेवैको नदी कुदेको छ तल….तल…।
रगतको टाटोले रालो नै लाटो छ घन्टीको । बोल्न सकिरहेको छैन ऊ । आवाज थुनिएको छ रगतको लतपतले । घन्टीलाई पूरै छेकबार लाएजस्तो-रगतको छिटा र लेस्याइलो स्पर्शले । टड्कारो आवाज रगतले निलेछ घन्टीको-लोसे र सुस्त स्वर आउँछ मुस्किलले टिनिन्न…. ।
‘बेइमान रगत ….!’
‘मलाई मेरो मने चाहिन्छ !’
मने अलिक अघि उसको बाबुले छिनालिसकेथ्यो । सानाको खुसीभन्दा ठूलाको सन्तुष्टिले जित्ने ठाउँमा त्यो ‘मने’ को अर्थ थिएन ।
उसले गरेको गफ सुन्छ–‘म एकै हातले छप्काउँथे पैला । बिहानभरि त एकै हातले छिनालेकै हो नि !’
‘दाइ, पैसा दिनु न !’
मरेको भाले झुण्ड्याएर र्फकंदा किशोर बोलिरहेको थियो-‘साला, तेरो सारा फूर्ति यो रगतै त हो नि !’
‘ढाडिएर बसेका होलान् !’
‘ए खानका काल, देवीले बोकाको खुट्टाको रगत खाँदिनन् । गर्धनकै रगत चाहिन्छ !’
ऊ अब भगवान्लाई चढाउने गर्धन छिनाल्न लागिपर्छ । एक पटक, दुई पटक, तीन पटक । उफ् ……बल्ल चार पटकमा छिनालिन्छ बोका । यसबीचमा बोका कराएको र हल्लीखल्ली मच्चिँदा वातावरणमा उत्तेजना फैलिन्छ बेस्सरी । हारजितको प्रतिक्रिया हरेकको ओठमा झुन्डिएको देख्छु ।
सानो कालो पाठीलाई पछाडि दुई खुट्टा समाएर बसेको वृद्धले भन्या–‘ए केटा, पाठीलाई पर्सी-पर्सी !’
‘ए केटा, पाठी चल्मलाइन त । मार नहान् । भगवान्ले नै नमानेजस्तो छ !’
मसँग आज रगतको हिसाबकिताब मात्र पो भो’ त ! आधादिन चैँ रगते आहालको किनारले दिएको तस्बिरले मेरो मन भरिए टम्म । कान त्यसैले भरियो । आँखा त्यसैले छोपिए । मनभरि यी रगतका गीत, सङ्गीत र स्वरमा थल्लिएँ म ।
‘लौ बाबु, बोका पर्सी-पर्सी !’
‘लौ, भगवान् माने । अब खुकुरी चला !’
निकै अघिदेखि अनेक कौतुक अनुहारमा एउटा खैरो रङको विदेशी जताततै तस्बिर खिचिरहेको देखिरा’छु म । ऊ हतास छ, व्यग्र छ । कताकताबाट आइपुग्यो मेरो छेउमा ।
तीनचार पातमा रगतका थोपा चढाइरहेको एउटा बूढोतिर फर्केर विदेशीले सोध्यो- ‘यो के गरेको ?’
‘धर्म गरेको !’
‘पाप चैँ के त ?’ विदेशीले क्यामेरा तेस्र्याएर सोध्यो ।